Ejikọtara saịtị ahụ na ọdịnaya niile edepụtara site na websaịtị niile yana site na saịtị mgbasa ozi mpaghara iji mee ka ndị bi na Indy na-aga n'ihu na ọrụ ahụ. Ọ bụ nnukwu ọrụ na-akwụghachi ụgwọ na otu egwuregwu dị egwu Mark Miles duziri. Onye ọ bụla kewara wee merie… anyị mere ya! Mark bu otu ndi ndu - o maara otu esi achikota ndi otu, wepu ihe mgbochi inwe oganihu, ma nye ndi nke ya ike inweta oru a.
Special ekele Michael na-ewepụta oge taa ịhụ m. Mike ji obi oma gosiputa ekele ya nye m maka mgbali, ogbugbu na ochichi m na-aga n'ihu na-akwalite mpaghara a. Ọ tụbara n'ime akpa osisi osisi maka ịmị barbecu iji gosipụta mmetụta m nwere ịmụnye ọkụ n'okpuru oru ngo. Enwere m obi ụtọ na m na-ekere òkè n'inweta Superbowl (ejiri n'aka… Peyton na Irsay nwere ike nyere aka, kwa) ma nwee ekele maka ọbụbụenyi m na Pat Coyle na-eme iji meghee ohere ndị a.
Ana m atụ anya iso Michael na ndị isi ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike iji weta nnukwu egwuregwu na mpaghara ahụ! Maka gị ndị nọ na mpụga Indianapolis - Achọghị m ịwụfu obodo anyị, mana ọ bụ nnukwu obodo nwere ụdị azụmahịa ejikọtara nke ọma. Ebe ọzọ ka ị nwere ike wepụta ma wụpụ iji nyere aka nweta Superbowl?!
Tags: 2012 nnukwu efereIndiaakara kilomitarca domennukwu efere na-elekọta mmadụ mediasuperbowl